Micro Cuntada Fasalka DS2504 saar Device Medical - DESUN
brushless Ghadafi DC bamka 1, feature: Brushless DC bamka isticmaalaa mabda'a brushless magnet joogto ah DC motor, oo ay weheliso rotor impeller ah, qaab-dhismeedka guryaha loogu talagalay in ay ka dhigi dareeraha loogu talagalay dhaqdhaqaaqa culus ee ka kooban saabka, maxaa yeelay, ma jiro khilaaf burush, sidaa darteed ma horseedaya, oolnimada sare, isticmaalka awood yar yahay, nolosha motor burush dheer, buuq yar yahay. Marka la barbar dhigo motor DC bamka brushless ah, brushless bamka DC leeyahay faa'iidooyinka soo socda: 1) usheeda dhexe Bamka waxa uu noqonayaa stat xidhan ...
brushless Ghadafi DC bamka
1, kasoo muuqdo:
Brushless DC bamka isticmaalaa mabda'a brushless magnet joogto ah DC motor, oo ay weheliso rotor impeller ah, qaab-dhismeedka guryaha loogu talagalay in ay ka dhigi dareeraha loogu talagalay dhaqdhaqaaqa culus ee ka kooban saabka, maxaa yeelay,
No khilaaf burush, sidaas dhimbiil lahayn; oolnimada sare, isticmaalka awood yar yahay, nolosha motor burush dheer, buuq yar yahay.
Marka la barbar dhigo motor DC bamka brushless ah, brushless bamka DC leeyahay faa'iidooyinka soo socda:
1) usheeda dhexe Bamka waxa uu noqonayaa seal xidhan ma guurto ah ka shaabaddii firfircoon, gabi ahaanba laga fogaado baxsiga warbaahinta; waxay noqon kartaa amphibious oo si buuxda u biyuhu
2) No sifaynta gaar ah iyo biyo qaboojinta, yaraynta isticmaalka tamarta
3) isticmaalka awoodda Low, oolnimada sare, Esplanaden oo Esplanaden, yaraynta saameynta ay gariirka motor on bamka iyo saamaynta on motor marka gariirka bamka cavitation ah
4) dollar rotor u simbiriirixan doonto on usheeda dhexe dhoobada ah, motor ka, ilaalinta bamka
5) Brushless DC bamka la isticmaalayo qaybaha electronic for commutation, iyada oo aan isticmaalka commutation burush carbon, isticmaalka-waxqabadka sare Duugga u adkaysta sax usheeda dhexe dhoobada iyo gacmo graphite, gacmo iyada oo loo marayo wax taaj oo kale duray iyo magnet ka wada guud ahaan looga fogaado doonaa xiran oo ku jeexjeexi, ay sabab u tahay
brushless DC nolosha bamka magnetic Tani waxa ay si wayn u xoojinaya. qayb bamka go'doomin magnetic ah stator iyo rotor gebi ahaanba go'doonsan stator iyo guddiga circuit qayb ka mid ah potting epoxy ah, 100% rotor biyuhu
Qayb ka mid ah magnet joogto ah, lisidda jirka qalab bay'adda u fiican, buuq yar yahay, size yar yar, qaab deggan. beegyada uu kala duwan oo la toosin karaa windings stator iyo la qalo karaa danab ballaaran.
Faa'iidooyinka: cimri dheer, buuq yar yahay ilaa 35dB hoos ku, waxaa loo isticmaali karaa wareegga biyaha kulul. Stator iyo guddiga circuit The qaybo ka mid ah baabuurta waxaa ka tarjumayay la epoxy oo gebi ahaanba ka rotor ah loogu rakibo quuska iyo ilaalin buuxda go'doonsan
Biyaha, biyo usheeda dhexe bamka la qodaa-waxqabadka sare steel sax ama usheeda dhexe dhoobada, sax sare, iska caabin ah lama filaan ah oo wanaagsan.
fasalka Cuntada 2504HF micro-bamka
1) size yar yar, rakibidda fudud
2) Import PPE alaabta ceeriin
3) dhameysteen saa'idka graphite, in la kordhiyo nolosha adeegga
4) heerkulka shaqada ugu badan ee 100 ℃ (optional)
5) danab ugu yaraan hawlgalka waa 3V, danab hawlgalka ugu badan ee 24V, laba baytariyada AA
6) laga beddeli karaa sida ay shuruudaha kala duwan oo ka mid ah ilaalinta (xanibeen ilaalinta / dambe polarity ilaalinta / ilaalinta biyaha) potting Epoxy, IP68 rating biyuhu
7) si ay u buuxiyaan shuruudaha cunto-fasalka
model Volts (V) Amps (A) socodka Max (LPM) Max madaxa kor u (M) Power (W)
3.flow / madaxa qalooca
Aquarium, iib ah nadaafada, jikada iyo musqusha, biyaha sariirta, massage cagta, beerashada soilless, isha, qalabka caafimaadka, qalabka yar reerka, iwm
7.matters u baahan fiiro gaar ah
1) sheyga waxaa iska leh bamka culus, waa in lagu dhejiyaa ee dareeraha hoose goobta!
2) Ha isticmaalin cabitaanada leh Qurub shisheeye ka badan 0.35mm iyo Qurub magnetic.
3) Bamgaree aan dareere ah, non-isticmaalka! Looga hortago rotor ka qoqobada at xawaaraha sare ee ay soo saaraan Duugga heerkulka sare iyo jeexa.
4) Marka la isticmaalayo ee deegaanka low-kulka ah, hubi in dareeraha ma talaagada ama viscous.
5) Waxaa lagama maarmaan ah inaad saadaaliso hooseeyo heaving dhaxan heerkulka, si looga hortago in bamka jiilaalka dilaaca barafka gudaha.
6) bamka brushless DC gacanta saxda ah ee ansixin gudaha, garaaca lahayn, haddii kale keentay in buuq kordhay iyo gariirka!
Previous: Qalabka guriga Ghadafi shubmo DS2503
Next: fasalka Micro-cunto DS3305 bamka caafimaadka
Ghadafi bamka biyaha Brushless DC
Factory iib toos ah Brushless biyo DC yar pu ...
6V ~ 24V 3W ~ 6W> 30000hrs 100degC cimri dheer Sma ...
24V 5m 9L / min tayada sare ee fasalka Long Life Cuntada ...
Factory iib toos ah oo tayo sare leh china gra Cuntada ...
6V ~ 24V 3W ~ 6W DC coolin tayo fiican leh super xasilloon ...
bamka 12V / 24V DC culus ee biyaha tamarta qoraxda, waayo, med ...